Satechi wuxuu soo bandhigayaa laba xeedho oo USB-C ah oo loogu talagalay Apple Watch iyo AirPods | Waxaan ka socdaa mac
Qalabka soo saaraha qalabka Satechi wuxuu hadda soo bandhigay xeedho leh xiriiriyaha USB-C oo aan ku qaadi karno labadaba Apple Wach iyo kiiska AirPods oo leh sanduuq wireless ah iyadoo kuxiran meesha aan ku xireyno dekedda USB-C, tan iyo mid kasta oo ka mid ah labada dhinac ee xeedho, wuxuu na siiyaa nidaam lacag-bixin oo kala duwan.
Qalabkani wuxuu ku xirnaan karaa labada isku xirnaanta USB-C ee iPad Pro iyo dekedda USB-C ee Macbook-ga ama aalad kasta oo kale oo leh dekedda isku xirka USB-C ama adabtarada korantada, sidaas darteed waa ku habboon tahay had iyo jeer ku sido gacmo-qabsiga 'MacBook' ama boorsada dhabarka ku haysata si aan ugu haysano mar kasta oo aan gacanta ugu baahanno.
El Satechi USB-C Watch AirPodsMaaddaama soo-saaruhu magacaabay qalabkan, wuxuu ka samaysan yahay aluminium wuxuuna na tusayaa naqshad aad u la mid ah tan laga helay noocyada wax soo saarka Apple. Aagga lagu dallacayo AirPods waxaa ku jira muuqaal kor loo qaaday oo geesaha saaran si looga hortago dhaqdhaqaaq kasta inuu ka soo dhaco saldhiga oo uu joojiyo lacag bixinta.
Waad ku mahadsan tahay labada qaybood ee isku dhafan ee isku dhafan, cabirkooda iswaafajsan, naqshad qurux badan iyo in aan loo baahnayn fiilo si loo isticmaalo, waxaan si raaxo leh ugu soo dalici karnaa Apple Watch ama AirPods. iyada oo aan laga noqonin wakhti kasta naqshadaynta alaabooyinka ay Apple leedahay wuxuu naga dhigayaa qashinkeena.
Xeedho-cabbirkani wuxuu leeyahay cabirro ah 4,4 cm oo dherer ah, ballaciisuna yahay 5,8 cm, dhumucdiisuna waa 1,4 cm, culeyskeeduna waa 46 garaam. Waxaa laga heli karaa Apple Store khadka tooska ah ee internetka 49,95 Dollar gudaha Mareykanka. Waqtiga aan qorayo maqaalkan, wali lagama helin Apple Store-ka internetka ee Spain iyo Mexico, laakiin waxay noqon doontaa maalmo kahor intaan la helin.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Satechi wuxuu soo bandhigayaa laba xeedho oo USB-C ah oo loogu talagalay Apple Watch iyo AirPods
Apple wuxuu soo saaraa fiidiyoow cusub oo uu ku dhiirrigelinayo xilli-ciyaareedkii labaad ee "Dhammaan Aadanaha"